ဖ = ဖခင်တစ်ယောက် ရဲ့ ဘ၀…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဖ = ဖခင်တစ်ယောက် ရဲ့ ဘ၀….
ဖ = ဖခင်တစ်ယောက် ရဲ့ ဘ၀….
Posted by alinsett on Oct 25, 2012 in Arts & Humanities, Creative Writing, Myanmar Gazette | 28 comments
အားလုံး လည်း….ခန့် မှန်းထားကြမှာပါပဲ ။
ဖ = အက္ခရာမှာ..ဖခင် နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းပဲ..လာမယ်..ဆိုတာ..။
ဒီနေရာ မှာ.. ဖြတ်ပြောစရာလေး.နည်းနည်း ရှိ လာပါပြီ ။
ကျွန်တော်… က = ကနေ…. ၊ အ = အထိ…အက္ခရာ စဉ်လိုက် ခေါင်းစဉ်လေးတွေ..ရွေးပြီး…
မူလ ရည်ရွယ်ထားတာက.. ဗလာစာရွက်နဲ့( ၃ ) မျက်နှာလောက်…ပဲ.ရေးမယ်..ပေါ့ ။
အက္ခရာ ပိုစ့် တွကို အားပေး.ဖတ်ရှု.ကြသူတွေက…. လက်ခံပြီး… အားပေး..ကြလို့ ..ရေးအားတွေ တက်..လာပါတယ် ။
တစ်ပုဒ်ထက် တစ်ပုဒ် ပိုကောင်းအောင်../. ပို အကျိုးရှိမယ့် စာမျိုးဖြစ်အောင်..ရေး..လာ…မိပါတယ် ။
ပြီးတော့… ဂေဇက် စာပေဆုပေးပွဲ အစီအစဉ်မှာ… ဆန်ကာတင် အပုဒ်ရေ တွေ..ထဲ.ကို…
ဆ = ….တို့ …. ဇ = တို့ … ပါလာတဲ့ အခါါ…. ပိုပြီးတော့..ရေးအားတွေ..တက်လာပြီး…
အခုဆိုရင်… ပိုစ့် တစ်ပုဒ်ကို…အနည်းဆုံး… ဗလာစာရွံက်နဲ့ခြောက်မျက်နှာ လောက် ရှည်လျား…နေပါပြီ ။
အက္ခရာ စဉ်လိုက်တွေ… ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး.ရေးလာခဲ့သမျှ…. ပိုစ့်တော်တော်များများဟာ…
တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်း.ရေး ခဲ့ရတဲ့ ပိုစ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး ။
စာအုပ် ထဲမှာ…အကြမ်းရေးထားသမျှ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး..ထဲက မှ….
သင့်တော်မယ်..ထင်ရာ… ပိုစ့်ကို ထပ် ရွေးချယ်…ပြိး…အချောပြန် ကူးပြီးမှ…. တင်ရတာပါ ။
ဒါကြောင့် တစ်ချို့ ပိုစ့်တွေဟာ….
ရေးထားတာက တခြား../ တင်ပြ ဖြစ်သွားတာက တခြားနဲ့ …. အလွဲလွဲအချော်ချော် ဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ် ။
ဒါတွေက..ကြားဖြတ် စကားလေးပါ ။
ဖ = ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀…လို့ …
စာတွေ..ဖွဲ့ နွဲ့ သီကုံးတဲ့အခါ……
မိခင် မေတ္တာ အဖွဲ့ ကိုသာ… အတွေ့ များ..လှ ပြီး.. ဖခင်တွေရဲ့ မေတ္တာ တရားအကြောင်းတော့…
အတွေ့နည်း နေသလားလို့ ပါ ။
ဒီတော့.. ကျွန်တော်..အခု..ဖခင်မေတ္တာ အကြောင်းကို….. နည်းနည်းပြောကြည့်ပါမယ် ။
မိခင်မေတ္တာ နဲ့ ဖခင် မေတ္တာ ဘယ် အရာက ပိုပြီး… အရေးပါသလဲ…ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ..မမေး ချင်ပါဘူး ။
ဒါကြောင့်… ဖခင်တွေရဲ့ မေတ္တာ တရာအကြောင်း…..
ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ အကြောင်း..ကို….
ရောက်တတ်ရာရာ…/ ထွေရာလေးပါး…ပြောကြည့်ပါ့မယ် ။
ကျွန်တော့် ပိုစ်တွေက်ို..စိတ်ရှည်ရှည် ထားပြီး..ဖတ်ရှု ပေး နေ ကျ…စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများ…
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ …. ခံစားပေးမယ့်…လို့… မျှော်လင့်ပါတယ် ။
မိခင်မေတ္တာ…ကြီးမား လှပါတယ် ။
အနှိုင်းမဲ့ ပါပဲ ။
ဖခင်တွေရဲ့ မေတ္တာ ကရော…….
မိခင် ဖြစ်သူတွေ….. သား / သမီးကို… ချစ်တဲ့ အချစ် ဟာ….. Unconditional Love တဲ့။
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာမဆို… ချစ် မြဲ..ချစ်တဲ့ အချစ် …။
ချွင်းချက် မရှ်ိတဲ့ အချစ်ပေါ့လေ ။
ဖခင်တွေ..သား / သမီးကို..ချစ်တဲ့ အချစ်ကတော့….. Conditional Love တဲ့။
သား / သမီးရဲ့ဆိုး / ကောင်း..အခြေအနေ ပေါ်မှာ…မူတည်ပြီး…
ဖခင် ရဲ့ အချစ်က… ပြောင်းလဲ..နိုင်တဲ့အချစ်တဲ့ ။
ကျွန်တော်က အပြည့်အ၀ လက်မခံ နိုင်ပါဘူး ။
ဖခင် တိုင်းတော့… အခြေအနေကို… မူတည်ပြီး.. မချစ်ပါဘူး ။
အခြေအနေကိုမူတည်ပြီး..ဖခင်တိုင်းရဲ့အချစ်..က မပြောင်းတတ်နိုင်ပါဘူး ။
တချို့ ဖခင်တွေ..ဟာ..သား / သမီး.. ဘယ်လောက် ဆိုးနေနေ…. ချစ်မြဲ..ချစ် ပါတယ် ။
အဇာတသတ်လို .. သားမျိုးကို..မွေးခဲ့ / ချစ်ခဲ့တဲ့ဗိမ္မိသာရဘုရင်ကြီး လို…. ဖခင်မျိုး…ရဲ့အချစ်ဟာ…
ရာဇ၀င်တွင်တဲ့မေတ္တာ စာရင်း ၀င်..ပါ ပဲ ။
ဒီ သားလုပ်သူ ဟာ… အဖေကို သတ်မှာ.သေချာတယ်..။ ဒါက်ု ကြို.သိ ထားလျက်နဲ့သားဖြစ်သူကို… လူဖြစ်အောင်.. ပြုစု ပျိုးထောင်
မွေး ခဲ့တဲ့ အဖေ ပါ ။
သားလေး ရဲ့ခူနာကို… ပါးစပ်ထဲ ငုံပြီး….ပြည်တွေ ပေါက်တာတောင်.. ထွေးမထုတ်ပဲ..မျို ချ ခဲ့တဲ့ … မေတ္တာပါ ။
သားက…ပြန် သတ်မှာကို..သိနေလျက်နဲ့ … အဖေ တစ်ယောက်ရဲ့ …. တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေ… လုံးဝ မပျက်ကွက် ခဲ့တာ စံ နမူနာ ယူစရာပါ ။
ဒီ သားလေး ကို… သူ့အသက် ထက်တောင်..ပို ချစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ..ပြ ခဲ့နိုင်တဲ့ မေတ္တာ…။
ဗိမ္မိသာရဘုရင်ကြီး လို… သားကို..ချစ်တဲ့ အချစ်မျိုး…ကို… အားကျမ်ိပါတယ် ။.
အဲဒီလို မေတ္တာဟာ…….. ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့သမိုင်းဝင် မေတ္တာပါ ။
သွေးနဲ့ ရင်းတဲ့မေတ္တာ….
ခြေဖ၀ါးကို….. ဓါးနဲ့ ခွဲ..ဆား အနယ် ခံရတဲ့ …. မေတ္တာ…..
အဲဒီ ဇာတ်တော်ကို သတိရ မိ တိုင်း…. ကျွန်တော်.. သံဝေဂ ရပါတယ် ။
အဇာတသတ်လို..သား မျိုး… ကျွန်တော်.. မဖြစ်အောင် နေမယ်..လို့ လည်း… တွေးမ်ိပါတယ် ။
မိခင် ထက်… မလျော့ တဲ့ အချစ် မေတ္တာ…. / အားကိုး တွယ်တာ စိတ်တွေ.. ထားပါ့မယ် ။
အဇာတသတ်လို…. ဖခင်ကို သတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဖခင်ရဲ့ …. ရုပ်ခန္ဓာကိုယ် ကို..သတ်တာမဟုတ်ဘူး ။
ဖခင်ရဲ့ … ယုံကြည်မှုကို သတ်တာ…
ဖခင်ရဲ့ ……..မေတ္တာ တရားကို..သတ်တာ….
ဖခင်ရဲ့ စိတ်ခန္ဓာ..ကို သတ်တာ လို့ ပဲ.. ဆိုကြပါစို့ ..။
အဲင်္ဒီလို..ဖခင်ရဲ့ … ပျော်ရွှင်မှုတွေ../ ယုံကြည့်မှုတွေ…/ မေတ္တာတရာတွေ..ကို.. သတ် ပစ်တတ်တဲ့ …
သားမျိုးတွေ..မကြာခဏ တွေ့ ရပါသေးတယ် ။
ခေတ်သစ် အဇာတသတ်တွေ.ပေါ့နော် ။
မော်ဒန် အဇာတသတ်တွေ..လို့ လည်း..ပြောလို့ ရမှာပေါ့ ။
အဲဒီလို.. ဖခင်ကို ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ …. သား / သမီးတွေ..ကို… တွေ့ တိုင်း..
အမိန့် တစ်ခု.. ပေး မိပါတယ် ။
ဖခင်ကို.. ဒုက္ခ ပေးတတ်သော..သားဆိုး
လုံးဝ ( လုံးဝ) မဖြစ်စေရ ။
ဒီ ထက်လည်း… တဆင့်တက်ပြီး…တွေးမိပါသေးတယ် ။
ကျွန်တော် အလင်းဆက် ဟာ…..
(နုပျို ချောမောနေတဲ့ … ယောကျာ်း ပျိုလေး.တစ်ယောက် ဆိုတော့..)
တစ်နေ့ နေ့ မှာ…..
အိမ်ထောင် အတည်တကျ နဲ့ ….
ဖခင် တစ်ယောက် နေရာ ကို..ရောက်လာဦးမှာပါ ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်…… ဖခင် တစ်ယောက်… ဖြစ်လာတဲ့ အခါ.မှာ….လည်း…
ဖခင်ကို.. ဒုက္ခ ပေးတတ်တဲ့သား / သမီး မျိုးတွေ…. ဖြစ်မလာအောင်…ကျွန်တော် ရဲ့သား / သမီးတွေကိူ… သေချာ ဆုံးမ / သင်ကြားပေးရမှာ…
အဲဒါ..ကျွန်တော့် တာဝန်ပါ ။
သား / သမီးတွေ….. ပြောများ / ဆိုမှား./ အပြုအမူ မှား တွေ..နဲ့လမ်းမှားကို မလျှောက်မိဖို့ …….
ပဲ့ကိုင်… ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်..ကြိုးစားရမှာ….
တစ်နေ့ နေ့မှာ……
သားကောင်း ဖခင် တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ …..
ခပ်ညံ့ ညံ့အဖေ တစ်ယောက်…. ဖြစ် မလာဖို့ ….
ကျွန်တော့်မှာ…. အရည်အချင်းတွေ… အများကြီး… လို အပ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်…အရမ်းကြိုက်တဲ့ ….. စကားလေး တစ်ခု ရှိ ပါတယ် ။
မင်းရဲ့ တိုင်းပြည်က မင်းကို ဘာတွေ..လုပ်ပေးမှာလဲ..လို့ မမေးနဲ့ 
မင်း ရဲ့ တိုင်းပြည်ကို..မင်း..ဘာတွေ..လုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ..လို့ ပဲ..အရင် မေးပါ ။ တဲ့။
အားလုံးလည်း.သိကြတဲ့ စကားပါ ။
အဲဒီင်္ စကားလေးကို… ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်သွားပါတယ် ။
လောလောဆယ်.. Donor တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်လွန်းလို့ … ကြိုးစားနေတဲ့ ….. ကျွန်တော့်အတွက်….
အဲင်္ဒီ စကား ဟာ….. အားး… တစ်ခုပါ ။
ကြားဖူး / မှတ်ဖူးတဲ့ နေ့ က စပြီး….
ကျွန်တော်က…. တိုင်းပြည် အတွက်.. သာ မက….
ဖခင် အတွက်ပါ.. ဒီလိုလေး.စဉ်းစားမိတယ် ။
ကျွန်တော့် ဖခင်က…. ကျွန်တော့်ကို…ဘာတွေ..ပေးနိုင်မှာလဲ..လို့ …မမေးတော့ပါဘူး ။
ကျွန်တော့် ဖခင်ကို..ကျွန်တော်.. ဘာတွေ… လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုနေသေးလဲ…/
ဘာတွေ..များ…ပေးဆပ် / ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ .လိုနေသေးလဲ..လို့ …. ပဲ..မေးပါတော့တယ် ။
လောကကြီးဆီကလည်း……. ကျွန်တော်..ဘာတွေ.. ရနိုင်ဦးမလဲ..လို့ မမေးတော့ပဲ….
လောကကြီးကို… ဘာတွေများ.. ကျွန်တော်.. ပေးလို့ ရမလဲ../. ဘာတွေ.ပေးနိုင်မှာလဲ…လို့ ..
မေးနုိုင် / ပေး လည်းပေးနိုင်တဲ့ .. လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်လာပါတယ် ။
ကိုယ့်အား..ကိုယ် ကိုးပြီး………
မိဘ ကျေးဇူးကို.. ဆပ်နိုင်တဲ့ … သားတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်..ကြိုးစားမယ် ။
ကျွန်တော်……သားကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်လို့ ….
အခု ကြိုးစားနေပါတယ် ။
ကျွန်တော် ..သားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာလေလေ…..
သာေးကာင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဖခင် အဖြစ်….
ဂုဏ်ယူ ကျေနပ်စရာ… ဘ၀ တစ်ခုမှာ… နေပျော် လာလေလေ ပါပဲ ။
ဖေဖေ့အတွက်ရော……
အကျိုးပေးကောင်းတဲ့ …… လူသားလေး တစ်ယောက် အဖြစ်…….
ခပ်ညံ့ညံ့ လူသားတစ်ယောက် ……
ခပ်ညံ့ညံ့သားတစ်ယောက်ကို..မွေးခဲ့ တဲ့ ဖခင်အဖြစ်…. အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး ။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်…… ခပ်ညံ့ညံ့ သားတစ်ယောက် …
ကျွန်တော့် ရဲ့….(တစ်နေ့ နေ့ မှာ. .မွေးလာမယ့်) သားကို…..
ခပ်ညံ့ညံ့… သားတစ်ယောက်… မဖြစ်စေရဘူး ။
ခပ်ညံ့ညံ့ သား / သမီးတွေက်ို… ဖန်တီးခဲ့တဲ့ .ခပ်ညံ့ညံ့ အဖေ တစ်ယောက် မဖြစ်စေရဘူး ။
ခပ် ညံ့ညံ့လူသားတစ်ယောက်…….
ဖခင်တစ်ယောက် နဲ့ ပက်သက်တာတွေကို….
တွေးမိသလောက်……ရေး ခဲ့ပါတယ် ။ ။
ဖခင် တွေ နဲ့ သာေးတွ ရဲ့ … အဖြစ် တွေက်ို..ကျွန်တော် မကြာခဏ ရေးခဲ့ ဖူးပါတယ် ။
ကျွန်တော် ဒီ ရွာသား… အသစ်ကလေး..ဖြစ်ချိန်မှာ.( အခုတော့ ဟောင်းပါပြီ..လို့ ..ကိုယ့် ဘာသာ ယူဆ ထားတာ:kwi: )
ဖခင်နဲ့ သား..ဘယ်သူ ပိုမှား သလဲ….. ဆိုတဲ့ပိုစ့်ပါ ။
(ယခု ကျွန်တော် တင်ပြမည့် အကြောင်းအရာကို အမေရိကန်စာရေးဆရာကြီး Paul Theroux ၏
The Mosquito Coast ၀တ္ထုကို ဖတ်ပြီး…ချိန်မှာ ရလိုက်ပါသည်။
ပုံပြင်ဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းတိုကလေးကို ထိုဝတ္ထုထဲ မှ ဇာတ်ကောင် Allie Fox ၏ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က
Fox ….တို့ကိုပြောပြသော အဖြစ်အပျက်ကလေး ဖြစ်ကြောင်း…ပထမဦးစွာ….၀န်ခံလိုပါသည်။)
ဖခင်ဖြစ်သူသည် သားကို အတန်းပညာလည်းသင်မပေး ..၊ ဆုံးမ ပဲ့ပြင်မှုလည်း မပြုပဲ…ဖြစ်သလို လွှတ်ထားသူဖြစ်သည်။
ထို ဖခင်၏သားသည်…အသက်20 အရွယ်သို့ ရောက်သောအခါ.. မကောင်းမှုများကို ရှောင်ကြဉ်ရမှန်း မသိ၊ စက်ဆုပ်ရကောင်းမှန်း
လူသားအချင်းချင်း ညှာတာ ထောက်ထားရကောင်းမှန်းလည်း မသိတော့…။
ထိုသားသည် ဓါးပြတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ သည့်အပြင် လူသတ်သမားတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်လာခဲ့ ပါတော့သည်။
ထိုစဉ်တုန်းက လူသတ်သမားများကို ကြိုးပေးပြီး သတ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုသား..(လူ သတ်သမား)သည်..
ကြိုးပေး ခံရပြီး..သေစားသေရန် အမ်ိန့် ချခံရပါတော့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာလုပ်ချင်သလဲ…။ အစားအစာ…၊ အရက်…ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခု ပြောစရာ…။
သားဖြစ်သူက အဖေ့အား နောက်ဆုံးအနေနှင့် တွေ့ လိုပါသည်..ဟု ပြော၏။
ထို့ ကြောင့်..သားနှင့် အဖေကို တွေ့ ပေးလိုက်ကြပါသည်။
ထိုအချိန်မှာ သားသည် လည်ပင်းကို ကြိုးစွပ်ခံရန်… ကြိုးစင် လှေကားထိပ်မှာ အသင့်ရောက်နေပြီ။
ဖခင်ကိုတွေ့ ရသောအခါ…သားက တီးတိုးစကား ပြောမည့် ဟန်ဖြင့် နား နား ကပ်ပြီး..ပြောသည်။
တကယ်တော့ ဘာစကားမျှ ပြောခြင်း မဟုတ်ပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကို ကြိုးတုပ်ခံထားရသော သားက ဖခင်၏ နားရွက်ကို သွားဖြင့် ကိုက်ဆွဲ ဖြတ်ပစ်လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ဖခင်က နာကျင်စွာ…သွေးရူးသွေးတမ်း အော်ဟစ် ပြေးသွားတော့မှ…သားက ပါးစပ်ထဲမှ နားရွက်ပြတ်ကို ထွေးထုတ်ပြီး
စကားတစ်ခွန်းဖြင့် အားလုံးကို ရှင်းပြသည်။
*** ကျွန်တော့်ကို အခုလို အခြေအနေမျိုးနဲ့ .*.ကျွန်တော်..*.ဖြစ်လာအောင်
ဖန်တီးပေးခဲ့ တဲ့…အဖေ့ အပြစ် အတွက်ပါ..။***
အဲသည် အဖြစ် အပျက်သည် တကယ် ရှိခဲ့ ဖူးသလားတော့ ကျွန်တော်သေချာ မသိပါ။
သို့ သော် ထို အဖြစ်အပျက်မျိုး ခပ်ဆင်ဆင်များကိုတော့ တွေ့ ဖူး..ကြးဖူးနေပါသည်။
ဖခင်များ၏ မသိ၊ နားမလည်မှု…၊ ညံ့ ဖျင်းမှု အပေါ် အထင်သေးနေသော..( အထင်လွဲရက်သော..)
သား..တချို့ ကို တွေ့ ဖူးပါသည်။
ယခု ဖတ်ခဲ့ ရသော အဖြစ်အပျက် တကယ် ရှိခဲ့ မည် ဆိုလျှင်…. ….
ဘယ်သူ မှားသလဲ…။ သားဖြစ်သူက မှားသလား..။ ဖခင် ဖြစ်သူက မှားခဲ့သလား..။
ကျွန်တော်ကတော့ ထို သားအဖ နှစ်ယောက်စလုံး အမှားများကို ကျူးလွန်ခဲ့ ကြသည်..ဟု မြင်မိပါသည်။
သား..သည် ဖခင် အပေါ် အပြစ်ဒဏ် ပြန်ပေးချင်လောက်အောင်..(နာကြည်းစွာ..).မှားခဲ့ ပါသည်။
သို့ သော် ထိုကဲ့ သို့မှားမိအောင်..( ထိုအခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာအောင်..) ဖန်တီးပေးခဲ့ သော ဖခင်လည်း မှားပါသည်။
(ဖခင်၏ အမှားသည် မသ်ိ နားမလည် မှု… ညံ့ဖျင်းမှု များမှ..လာသော အမှားဖြစ်ပါသည်။)
ဒါဖြင့် ဘယ်သူ့အမှားက ပို ကြီးမားသလဲ…။
ထို မေးခွန်း၏ အဖြေကိုတော့ ကျွန်တော် ထုတ်ဖော် မပြောချင်တော့ပါ။ ။ ။
11 .9.2011 ./ 19;50…pm..
အဲင်္ဒီလိုလေး..ရေးခဲ့ ဖူးပါတယ် ။
ပြန် တူးဖော်ပေးလိုက်တာပါနော် ။
အဖေ တစ်ယောက်နဲ့ …သားတစ်ယောက်ရဲ့ပြဿနာ တစ်ခုကို..တင်ပြ ဖူးပါသေးတယ် ။
သားတစ်ယောက် ရဲ့ လိုအပ်ချက် ဆိုတဲ့ .. ၀တ္ထုတိုလေးပါ ။ http://myanmargazette.net/136658/arts-humanities
ဒါက နငယ်ကလေး..အမြီး နည်းနည်း တိုနေမှာစိုးလို့ .. ထပ် ဆွဲ ဆန့်ပေးနေတဲ့ သဘောပါ ။
အတွန့် တက် တာလို့ ပြောရင်လည်း ရပါတယ် ။
ဖခင်မေတ္တာ နဲ့ ပက်သက်တာလေးတွေ…
ဆက်လက်..ပြီး.အက္ခရာများနဲ့ချီတက်နေပါဦးမယ်.. ။
ည = http://myanmargazette.net/148098/arts-humanities
ဖေဖေ ဖေဖေ လို့ခေါ်ပြီး၊
ဖေဖေ နဲ့ သားစကားတွေပြောချင်ပေမယ့်
ဖခင်အတွက် ကောင်းမှု့ပြု အမျှဝေတဲ့အခါ
ဖေဖေ သာဓုခေါ်ကာ ကျေနပ်ပါဟုပြောရုံသာဘဲ ရှိသူပါ ကိုအလင်းဆက်ရေ။
ဖေဖေ ဆိုလို့ 
ဖောင်တော်ဦး ဘုရားလဲ လိုက်ပို့ တယ်
ဖိုတိုရှော့ သုံးနည်းလဲ သင်ပေးတယ်
ဖေဖေက ဖက်ထုပ်ဆီချက်ကြိုက်တဲ့ ဖွားဖွားရဲ့သားပဲ ဖြစ်တယ်..တိန်..
ဆိုတော့ ဖက်ထုပ်ဆိုင် ပိုင်ရှင်လားဟင်
အင်းး အလင်းဆက်ရဲ့ ဖခင်အကြောင်းလေးကို ဖတ်ရမှ ဖေဖေ့ကို လွမ်းလာသလိုပဲ…ဖုန်းဆက်အုံးမှ။
အမကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းကကော အခုကောအမြဲမပြောင်းလဲပဲ ပြောတတ်တာက အမေထက်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်တော့ နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်း မှားနေဦးမှာပါပဲ
အမှားဆိုတဲ့ အရာက ခင်ဗျားတို့ကိုလားပြီး မှားပါမှားပါလို့ မပြောပါဘူး
ဘယ်သူမပြုမိမိမှု ပေါ့ဗျာ။ အခုလို အမေ မေတ္တာဖွဲ့တွေ ပေါးများနေတဲ့အချိန်မှာ
အဖေ အကြောင်းရေးပေးတာလဲ မှတ်သားစရာ ဖတ်ထားစရာတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်
အောက်က စိန်ဗိုက်ရဲ့ မန့်ကိုဖတ်ရတော့ တဟားဟားဖြစ်ရတော့တာပဲ။
အန်တီလည်း အဖေ့ကိုချစ်တဲ့ သမီးဆိုတော့ ဦး…က ပဒုမ္မာ့အဖေလေ လို့ အဖေဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်စေချင်မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဖေ အသက်ရှင်စဉ်ထိတော့ ဦး…ရဲ့ သမီးဘ၀ပဲ ရှိလိုက်ရပါတယ်။
အဖေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ အဖေ့နာမည်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးထပ်မရတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အဖေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြသေးသူများ အဖေ့ဂုဏ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သားသမီးတွေ ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားကြစေချင်ပါတယ်။
မိခင်ဖြစ်ဖို့လည်း.. Eggs လိုပါတယ်..
အမေဆီက.. မျိုးဥနဲ့..အဖေရဲ့..သုတ်ပိုး ကာလပေါက်ဈေးအရကတော့… အမေမျိုးဥက..ဈေးအများကြီးပိုပါသဗျ..
ဖ = ဖခင်တစ်ယောက် ရဲ့ ဘ၀ဖြစ်ဖို့.. ဈေးပေါပါလားနော.
What is an average sperm donation price?
In some cases, donating sperm can be another part time source of income. The price has risen over the years, simply because demand has overwhelmed supply, especially in recent years. You can expect to make between 30 and 40 dollarsavisit, with some places givingabonus for long term repeat donations.
မိခင်ရဲ့. Eggs က ဖြစ်လာတဲ့ သန္ဓေသားလေးအပြင်ရောက်ဘို့ဆိုရင်
သာမန်ဆေးရုံမှာမွေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှ အနည်းဆုံး ငါးသိန်းမအောက်ဘူး။
တကယ်ပြောရင်တော့ မိခင်ရောဖခင်ရှိလို့သာ ကျနော်တို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ
နောက်ကျနော်တို့ လူလားမမြောက်မခြင်းသူတို့မှာ တာဝန်ယူခဲ့ရတာလေ။
ကျန်တဲ့နေမူ့ထိုင်မူ့ဘ၀တွေကတော့ ကိုယ့် အကျုိုးပေးနဲ့ကိုယ်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သောကံမကောင်းသူက ဖခင်မိခင်ဘ၀ရောက်ခွင့်မကြုံဘူးဗျ။
(ဒီနေရာမှာ ကံ=အလုပ် လို့တော့ လာမငြင်းနဲ့နော် ရှုပ်ကုန်မယ်)
အဖေကို ပိုချစ်သူ တစ်ယောက်ကနေ အားပေးသွားပါတယ်။
ဖ= ဖခင် ဆိုတဲ့ အလင်းဆက်ရေ-
နောင်တစ်ချိန်မှာ ဖခင်ကောင်းဖြစ်မှာပဲလို့ နမိတ်ဖတ်ပေးလိုက်မယ်။ :hee:
ကိုယ့်ဘ၀မှာလည်း စံပြထားရသူဟာ အဖေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဖေဟာ မိသားစုကို ရှာဖွေကျွေးမွေးရုံမကဘူး မိသားစုဘ၀ ပြည့်စုံအောင် အစစအရာရာ ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။
ရုပ်ရှင်ပြတာ၊ ဇာတ်ပွဲတွေ လိုက်ပြတာ၊ ပန်းခြံသွားတာ၊ အပျော်ခရီးထွက်တာတွေ အပြင်
သားသမီးတွေကို အ၀တ်အစား၊ အသုံးအဆောင် ဆင်တာတွေကအစ လုပ်ပေးခဲ့တယ်။
အမျှော်အမြင်ရှိရှိနဲ့ ပညာရေးမှာ အားပေးခဲ့တယ်။
ကျောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်း မိဘလုပ်ငန်းခွင်ကို ဆက်ခံနိုင်အောင်ထိန်းကျောင်းသင်ကြားပြီး တွဲလုပ်ခဲ့လို့ အဖေမရှိတဲ့အခါမှာလည်း ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေ အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်နိုင်လို့ ဖခင်ရဲ့ ကျေးဇူးဟာ ကြီးမားလှပါတယ်။
အလင်းဆက်ရဲ့ အရေးအသားတွေက အက္ခရာတစ်လုံးထက်တစ်လုံး ပိုမိုပြောင်မြောက်လာတယ်နော :hee:
အော်လက်စက်သတ်တော့ ကိုအလင်းဆက်က သူလူပျိုဆိုတာ
အလင်းဆက် ရေးပြတဲ့“ဖခင်နဲ့ သား..ဘယ်သူ ပိုမှား သလဲ…” ဆိုတဲ့ 
ပုံပြင်လေးလည်း ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်…
ခေတ်သစ် အဇာတသတ်တွေ မော်ဒန် အဇာတသတ်တွေ.
အကြောင်း အလင်းဆက် ပုံဖေါ်ထုဆစ်ထားပုံလေးကို အထူးနှစ်သက်မိပါဂျောင်းးးး
ကိုအလင်းဆက်ရေ ဖခင်ရဲ့အကြောင်းရေးထားတာတွေ့ရလို့ အလွန်ပဲဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကြုံလို့ပြောပါဦးမယ်။ ကျမတို့မိသားစုထဲမှာ ဘယ်တုန်းကမှမရှိဖူးတဲ့ ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေမှုဆိုတာကို တစ်ခါကြုံဖူးပါတယ်။ မောင်လေးအကြီးနဲ့ ဖေဖေနဲ့ကြားမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထိပ်တိုက်အကြီးအကျယ်မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က အမြင်မကြည်လင်ကြဘူးပေါ့။ အဲဒီလိုဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ မောင်လေးနေမကောင်းဖြစ်တော့ ဖေဖေက သူ့သားကိုနေ့ရော ညပါတအားပြုစုယုယတာပါ။ စားစရာသစ်သီးဆိုလည်း သူကိုယ်တိုင်ဝယ် အခွန်နွှာ စိတ်ပြီး အဆင်သင့်စားရုံအထိ လုပ်ပေးတာ။ ညဆိုလည်း ဖေဖေရော မေမေရော မောင်လေးကို အလယ်မှာထားပြီး ခြင်ထောင်ထဲမှာ(၃) ယောက်အိပ်ပြီး မောင်လေးအိပ်ပျော် မပျော်ဆိုတာ အကဲခတ်ရင်း အိပ်မပျော်တာတွေ့ရင် အိပ်ပျော်အောင် ခြေတွေ လက်တွေ ဆုပ်နှယ်ပေးပါတယ်။ ဆီး ၀မ်းသွားတာကအစ အခြေအနေကို ဆန်းစစ်ပါတယ်။ ရက်အတော်ကြာ ဘာရောဂါမှန်းမသိရပဲ တဖြည်းဖြည်းပိန်လာတော့ ဖေဖေဆို သားသမီးဇောနဲ့ ပြာတယ်ပြောရမလား ဗျာများတယ်ပြောရမလား အဲဒီလိုထိတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မေမေဆိုရင်တော့ ဆိုဖွယ်ရာမရှိပေါ့။ နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ ဆုံးမစကားအနေနဲ့ပြောစရာမလိုလိုက်ပဲ မောင်လေးဟာ ဖေဖေ့အပေါ် အမြင်ပြောင်းသွားပြီး မောင်လေးနဲ့ ဖေဖေ့ကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ နွေးထွေးသွားပါတယ်။
မိဘဆိုတာ အနှိုင်းမဲ့ရတနာနှစ်ပါးပါ။ အမေဖြစ်ဖြစ်အဖေဖြစ်ဖြစ် သားသမီးကိုသူတို့ချစ်တတ်သလိုချစ်ကြတာပါပဲလေ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်လာတယ်ဆိုကတည်းက မိဘတွေကျေးဇူးပဲလေ။ သူတို့ကြောင့်လူဆိုပြီးဖြစ်ခွင့်ရတာ။
အဲဒိတော့ကာ မိဘကဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာထက် ကိုယ်ကဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာတွေးတာမှန်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
သားနဲ့အဖေဘယ်သူမှားလဲဆိုရင်တော့ နှစ်ယောက်စလုံးမှားတာပါပဲလေ။ သားသမီးမကောင်းလည်းမိဘခေါင်းပေါ်ပဲကျသလို
မိဘဆိုတာ အနှိုင်းမဲ့ရတနာနှစ်ပါးပါလို့ မရွှေကြည် ပြောတော့ ဖခင် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ကို ထူးအိမ်သင် ရဲ့ “တုနှိုင်း မဲ့ ရတနာ” သီချင်းလေး သတိရသွား သဗျာ !
အရမ်းကောင်းတဲ့သီချင်းလေးပါ ကိုရဲင့်လှိုင်ရေ ဖခင်တယောက်ရဲ့ စေတနာတွေကို
အနက်ရှိုင်းဆုံး ချစ်မစ်တာ တရား ကို သမီးလေး သာ ဖန်ဆင်းပေး နိုင်ခဲ့တာရယ် မရွှေကြည် ပြောတဲ့ “ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ကာတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်အနေအထား” ဆိုတဲ့ နေရာ လေးရယ်က ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမစ်တာ ရဲ့ အင်အားတွေပေါ့ဗျာ !
ကောင်းမှု ပြု..အမျှဝေ..တတ် တယ်..ဆိုကတည်းက
သားကောင်းတစ်ယောက် ဆိုတာ… သိ..လိုက်ရပါတယ် ။
ဖ = အက္ခရာတွ…ပေါကြွယ်ဝလိုက်ထာ….
ဆက်လက်.. အားပေးပါဦး..ခင်ဗျ ။
may flowers ရေ..
အခု ပိုစ့် လေး..မရေးခင်အထိ…
မေမေ့ကို ပိုချစ်တယ်.လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ် ။
အခု ပိုစ့်ကိူု ရေးဖို့ .တွေးမိချိန်က စပြီး..မှ….
ဖေဖေ့ ကိုလည်း.မေမေ့ ကို ထက် မလျော့ တဲ့ 
အချစ်နဲ့ချစ်ပါတော့မယ်..လို့ …
ကိုယ့် တ၇ားလေး.ကိုယ် ပြန်ရှာတွေ့ သွားတာ…။
ဟုတ်တယ်နော် ။ အမှားနဲ့ ကင်းတာရယ်.. တော့ မရှိ်ပါဘူးလေ ။
ကျွန်တော်လည်း..အမှားတစ်ခု ကို နောက် တစ်ခါ..ထပ် မမှားအောင်….သာ ကြိုးစားနေရတာ..
အဆက်မပြတ် ခံစား အားပေး.နေလို့ ကျေးဇူးနော် ။
မိခင်မေတ္တာတွေ.အကြောင်း… ဖွဲ့ နွဲ့ တာတွေ..များနေတဲ့ အချိန်မှာ..
ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ဖခင် အကြောင်းလေး.ကို..
လက်ခံ အားပေး.လို့ ..၀မ်းသာမိပါတယ် ။
ကျွန်တော်လည်း.. ဒီသားရဲ့အဖေ… ဖြစ်အောင်..
အဖေ့ကို… ဂုဏ်တက်အောင်.. ထားပါ့မယ်..နော် ။
ခံစား..အားပေး.လို့ ကျေးဇူး ။
ကိန်းဂဏာန်းတွေ..နဲံ့ ကို… ပြသွားတာပေါ့လေ ။
Khaing Zar Win ရေ..
ဆက်လက် အားပေးဦးနော် ။
နောင်တစ်ချိန်မှာ ဖခင်ကောင်းဖြစ်မှာပဲလို့ နမိတ်ဖတ်ပေးလိုက် တဲ့ အတွက်…
ရှဲ ရှဲ နော် ။
ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ တာဝန်ရှိ်သွားပြီ ။
ချစ်တုဝေ..လေးကို… လွမ်းလိုက်တာ..။ အဲ…ဘာမှ လည်း..မဆိုင်ဘူး ။
ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကျေးဇူးတရားကို…ဖြည့်စွက် … ပြောပေး ထားတာလေး..အရမ်းကောင်းပါတယ် ။
ကျွန်တော့် ရဲ့အက္ခရာတွေ…
တစ်ပုဒ်ထက် တစ်ပုဒ် ပို ပို ပြောင်မြောက်လာတယ်…တဲ့ လား။
( ကြည့်…၀မ်းတာ..တွား တာ..ဂျဂါး ဒေါင် မပီတော့ ၀ူး..)
ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားရေးဦးမယ်.နော် .
အားလုံးတော်တန်တိတ်၊ မွတ်စ်သဂျီးသမက် မာမူကြောင်ကြီး … ရေ
ဦးဦးရဲ့ကဖျာ..လေးကလည်း..တယ်ကောင်း…..
ဂယ်ပြောတာ.။ ဦးဦး က ကဗျာ..မှာ… တကယ်ကောင်းတာ..။
သူကြီးတမက် ဖြစ်နေတာတော့ မကောင်းဝူးဂျာ..။:buu:
jullies cezer ရေ…
နို့ မို့ ဆို..ကိုယ် က… ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်..လို့ ပြောတော့…
ဟှလှေး ဖေကြိ်ီး..ထင်ကုန်မှာစိုးလို့ ..
အားပေး.လို့ ကျေးဇူးနော် ။
ဆိုလို့ … ၀မ်းတာ မိပါဂျောင်း….
သားအဖ နှစ်ယောက် ပြေလည် သွားပုံလေး.. က..
ကျွန်တော်သာ ဆိုရင်..အဲဒီ အဖြစ်လေးကို..
ခံစားပြီး.ပို့ စ်လေး တစ်ပုဒ်တော့ရေး မိမှာပဲ..ဗျ ။
ကျွန်တော့် စာမူလေးကို..အားပေး.ဖတ်ရှု..ခံစား.. လို့ .ကျေးဇူးပါနော် ။
ဘာပဲ.ပြောပြော.. မမရွှေကြည်ကတော့ မမရျွှေကြည်ပဲ.နော် ။
မမရျွှေကြည်…..ဒီ ၀ါ ကျွတ်တော့မယ်နော် ။
မမရွှေကြည် ရဲ့ မင်္ဂလာ သတင်းလေး..ဘာလေး.ကြားရတော့မလား..လို့ မျှော်လင့်မိပါကြောင်း…
Comment ကို… အားလုံးအတွက်…
ဖျတ်ခနဲ..ပျောက်ခြင်း မလှ ပျောက်သွားလို့ …
အခု..လို … အပိုဒ်တွေ.ခွဲပြီး.တင်လိုက်ရတာကို…
တညိုး မထင်ပါနဲ့ လို့ …
အရှည်ကြ်ီး... မန့် ထားပြီး..မှ..ပျောက်သွားတာ..က
ကျွန်တော့်အက္ခရာ များကို..
ခရီး တစ်ခု ထွက်သလို….
ကျေးဇူး…ကမ္ဘာ ..ပါပဲ..လိ်ု့ ။
ကျွန်တော့် ကြည့်ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးထဲက စာသားလေး ကျွန်တော်ရွတ်ပြမယ် ။
အရီး ငယ်ငယ်က နှာခေါင်းပိတ်နေတဲ့ ညတစ်ညမှာ အသက်ကောင်းကောင်း မရှုနိုင်လို့ ပါးစပ်နဲ့ ရှုနေရတာ ကို
အရီးအဖေ သူ့ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းထဲ က နှပ် တွေ စုတ်ထုတ်ပေးခဲ့တော့ ကောင်းကောင်းအိပ်နိုင်သွားတယ်။
အဲဒါကို အဖေ က ပြန်ပြောတာ မဟုတ်။
အမေ က ပုံပြောသလို ပြန်ပြန် ပြောတာ။
အဖေက အဲဒီအချိန် ပြုံးသလို မပြုံးသလို နဲ့ နားထောင် ခဲ့တယ်။
အဲဒီ ပုံပြင်ကြောင့် အဖေ မကြိုက်တာ လုပ်ဖို့ ဘယ်တော့ မှ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူး။
တကယ်တော့ ဒီတစ်ချက် ထဲနဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ။
အလင်းဆက် လဲ ဖခင်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မိခင်ကောင်း ဖြစ်မဲ့ မိန်းကလေး နဲ့ တွေ့ပါစေ လို့လဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
အဖေ့ ကျေးဇူး တွေကို ဖွဲ့ပြထားတာ အတွက်ရော၊ မိဘ ကို ကျေးဇူးပြုဖို့ပါ remind လုပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့အနွဲ့ကောင်း စာစု လေး အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
အပေါ်က မိုးမင်းသား မျှထားတဲ့
“အဖေနဲ့ သား နှစ်ဦးကြားဝယ်…၀တ္တရားကိုယ်စီ..ရှိကြသည် ။”
စာလေး ကိုလဲ သဘောကျတယ်။
YE YINT HLAING ရေ..
ဖတ်ရှု.အားပေး ခံစားသွား လို့ ကျေးဇူးနော် ။
မနေ့ က ကျေးဇူးတင်စကားပြန်ပြောနေတုန်းမှာ..
ကွန်မန့် တချို့ မပေါ် ပဲ..ပျောက်နေလို့ .ကျန်ခဲ့ပါတယ်..။
အခုမှ ပေါ် လာလို့အခုမှ ပဲ…ပြန်ပြောရတာပါ ။
အာ ဟိ ။
အရီး ရဲ့ ဖေဖေ လည်း.အရီးကို..တော်တော်လေး… ချစ်မယ့်ပုံပဲ.နော် ။
အဖေ တွေက သမီးတွေကို ပိုချစ်တယ်…တဲ့ ။ လူတွေ.တော်တော်များများ ပြောကြတာပါ ။
သားလေး တစ်ယောက် လိုချင်တယ်..လို့။
အဲဒီ သားလေးက်ို ကျွန်တော့် ထက် အဆ များစွာ..တော်အောင် ../ တတ်အောင်..
ပြိးတော့… ကျွန်တော် မသိလိုက် / မတတ်လိုက်တဲ့အသိပညာတွေ..
အဲဒီ သားလေးကို… .. အကောင်းဆုံး.ဆိုတဲ့ အရာတွေ..ပိုင်ဆိုင် နိုင်အောင်..
အမြင့်ဆုံးဆ.ိုတဲ့ နေရာတွေ .ရောက်နိုင်အောင်…
ဘေးက နေ လမ်းပြ….ပေးမယ် ။
မှန်တာတွေ ကောင်တာတွေ..ကို.. ဥာဏ် နဲ့ ယှဉ်ပြီး.. လုပ်တတ်အောင်..
ဘေးကနေ…. တည့်မတ်ပေးချင်တာ .။
ကျွန်တော်…. စိတ်တိုင်းကျ…. သွန်းလုပ်ထားတဲ့ ..
ဒီလောက ထဲမှာ… ကောင်းကျိုးပြု ဖို့ …. ချန်ထားခဲ့ချင်တာ . ။
ကိုယ် လိုသလို ပုံသွင်းတိုင်းတော့လည်း.ရမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ ။
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ..ပဲ..ဖြစ်ခိုင်းနေရင်..ကလေး ရဲ့ဘ၀ က..
သူ့ ဘ၀ သူ မပိုင်ပဲ… မိဘ က ပိုင်ထားတဲ့ ဘ၀ ဖြစ်သွားမှာ..။
သူ့ ကိုယ် ပိုင် ဘ၀ တစ်ခုကို..ထုဆစ်ရာမှာ..မိဘ က မိဘနေရာကနေ..
အလက်ဆင်းရေ .. အမြဲတန်းအားပေးနေပါတယ် ။
အက္ခရာတွေ စုံအောင်ဆိုတော့ အတော့်ကို အားထုတ်ရမယ်နော် …
မဆုတ်မနစ် အားထုတ်ရေးသားမှု့ကို လေးစားပါတယ် အလင်းဆက်ရေ..
ဟုတ် ကဲ…။ ကထူးဆန်းရေ…
အက္ခရာ တစ်လုံးထက် တစ် လုံး..ပို… ပို..ရေးစရာ..ရှားလာ သလားလို့။
က ..ကြိး လေး.တစ်လုံးတောင်မရေးတော့ဘူးကွာ..လို့ ..တွေးမိသေးတယ် ။
အဆက်မပြတ်.ဖတ်နေတဲ့ကထူးဆန်းတို့ ရဲ့ အားပေးမှုတွေကြောင့်…
ဆက်လက် အားပေးပါဦးနော် ။